Mogadishu Journal » 2018 » June » 9
Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in deg deg loo furo jidadka xiran ee Muqdisho
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa faray Hey’adaha amniga inay shacabka u sahlaan isu socodka magaalada oo maalmihii la soo dhaafay ay shacabka dhib ku qabeen, kaddib markii ay ciidamada xireen jidad dhowr ah. Qoraal kooban oo lagu soo qoray barta...
Qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Sanguuni
Mjournal :-Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan qarax Ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay degaanka Sanguuni ee ku yaalla Duleedka Magaalada Kismaayo. Qaraxan ayaa waxaa fuliyay nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo kaxeynayay gaari Caasi ah oo la soo miidaamiyay,...
Duqa Muqdisho oo Xarigga ka jaray Waddo Isku xirta Madaxtooyada iyo Dekedda oo dib loo dhisay
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan (Eng Yarisow) ayaa xariga ka jaray Waddada isku-xirta Madaxtooyada Qaranka iyo Dekedda Muqdisho, taasoo dhawaan dib-u-dhis ballaaran lagu sameeyey. Guddoomiye Yariisow ayaa sheegay in dhismaha...
Mjournal :-Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) ayaa ka warbixiyay nidaamka doorasho ee dalka ka dhici doona sanadka 2020, kaddib markii shirkii Golaha Amniga Qaranka ee ka dhacay Baydhabo la isku raacay in dalka ay...
Cayaaryahan Sergej Milinkovic-Savic oo khadka dhexe kaga cayaaro SS Lazio iyo xulka Serbia waxaa siweyn loola xariirinaa kooxaha Man United iyo Juventus. Balse Serbian-kan ayaa mustaqbalkiisa cayaareed ka hadlay ka hor inta uusan koobka aduunka bilaabanin si uu culeeska isaga...
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay geerida askari Mareykan ahaa iyo afar kale oo la dhaawacay, kadib markii xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ay ku weerareen deegaanka Baar-sanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo. Donald Trump ayaa marka hore tacsi u...
Mjournal :-Dowladda Turkiga ayaa dalkeeda tababar ugu soo geba gebeysay saraakiil iyo saraakiil xigeen oo Soomaali ah,kuwaasi oo in muddo ah dalkaasi Turkiga ku baranayaya casharo la xiriira heerarka iyo sharciyada kala duwan ee ciidamadu ay leeyihiin. Tababarkani oo in muddo ah...
Al-shabaab oo dilay Askari Mareykanka ah
Mjournal :-Warar isa soo taraya ayaa sheegaya in weerar gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo lagu dilay askari Mareykan ah, halka lagu dhaawacay afar kale, kaddib markii wadada loo galay. Sida wararku sheegayaan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa...